Xog: Sideey ku timid in Baarlamaanka Puntland ay Kalsoonidda kala laabtaan Golaha Wasiiradda ee Maamulkaas.? – Hornafrik Media Network
Baarlamaanka Maamulka Puntland ayaa kulan ay yeesheen Talaadii maanta waxa ay kalsoonidii kala laabteen Golaha Wasiirada Maamulka Puntland.
Eng Maxamuud Xaaji Saalax Wasiirkii hore ee Wasaarada Beeraha Puntland ahaana Gudoomiyihii Shirkii Wadatashiga Maamulkaas oo Wareysi siiyay Radio Dalsan ayaa sheegay in Mooshinkaas la doonayay in xilka looga qaado Madaxweyne C/wali Maxamed Cali Gaas,balse Madaxweyne Gaas uu arinkaa u weeciyay Golaha Wasiirada Baarlamaankana go’aankaa ay qaateen.
Madaxwaynaha Puntland, C/wali Gaas waxa uu isna goor dambe oo Maanta ah aqbalay Go’aanka Baarlamaan Goboleedka Puntland ay ku kala dirteen Golaha Wasiiradda ee Xukuumadda uu hogaamiyo. taasoo ka dhigaysa in Gaas uu soo dhisayo Gole Wasaaradeed cusub.
Xog: Immisa Shil ayeey gaysteen 4-tii Sanno ee la soo dhaafay Ciidamadda AMISOM,? Magdhawse ma ka bixiyeen,?